Fandrobana sekoly Lehilahy iray no tratra ambodiomby
Lehilahy iray no voasambotry ny mpiasan'ny ANS ary natolotra ny polisim-pirenena ao amin'ny CSP1 Analakely ny alakamisy 19 martsa teo noho ny resaka halatra.
Tokony ho tamin'ny 04 ora marainan'io alakamisy io no nahatsikaritra lehilahy iray niditra an-tsokosoko tao amin'ny faritry ny sekoly ny mpiambina. Narahina avy hatrany izy ka teo am-pangalarana izy no nosamborina ka tsy afa-nandositra intsony. Niantso polisy avy hatrany ny tompon'andraikitry ny toerana ka tonga ny polisy naka ity olon-dratsy ity. Nametraka fitoriana ihany koa ny tompon'andraikitra tamin'io alakamisy io. Tamin'ny fanadihadiana natao azy dia niaiky ny helony ity lehilahy ity. Efa naiditra am-ponja vonjy maika moa ity farany.